I-FAQ-Sekonic Metals Technology Co., Ltd.
Molo, unemibuzo, sineempendulo
Ukuba unombuzo, silapha ukunceda. Jonga le mibuzo ilandelayo ibuzwa rhoqo ukuze ubone ukuba abanye babuza into enye. Singathanda nokuva kuwe, ke sinike umnxeba kule nombolo: 86-0511-86826607 okanye ugcwalise le fomu kwiphepha lethu lokunxibelelana.
Loluphi uhlobo lolwazi olufunayo kum ukubonelela ngesicatshulwa esichanekileyo?
Ulwazi oluthe kratya, lungcono. Nangona kunjalo, ezi zinto zilandelayo zinokuqinisekisa ukuba sikunika ikowuti ngexesha elifanelekileyo nelichanekileyo: Umzobo okanye ubungakanani beenkcukacha, ingxubevange, ubungakanani, ixesha elifunekayo lokukhokela okanye umhla wenqanawa, kunye neenkcukacha. Nceda uqaphele ukuba iinkcukacha zibandakanya iimfuno zovavanyo, izatifikethi, ukupakisha, kunye nazo naziphi na iimfuno ezizodwa onokuthi ube nazo. Zive ukhululekile ukudibana neNjineli yakho yokuThengisa ngaphakathi ukuba uyathandabuza
Yiyiphi imfuno yakho encinci ye-oda?
Siza kubonisa i-MOQ yento nganye kwiphepha lesicatshulwa. Samkela isampulu kunye nomyalelo wetyala. Ukuba ubungakanani bento enye abunakufikelela kwi-MOQ, ixabiso kufuneka libe lixabiso lesampulu.
Yeyiphi imilinganiselo esemgangathweni edibana nezinto zakho?
Izinto zesinyithi zeSekonic zihlala ziqinisekisiwe kwi-ASTM, ASME, AMS, GE, kunye nePratt kunye neWhitney specs, kunye nezinye. Ngolwazi olongezelelweyo malunga nokubalulwa, nxibelelana noMmeli weNtengiso.
Izinto nganye okanye iimveliso, siza kunika isatifikethi sovavanyo lweMill (En 10204.3.1 okanye i-EN10204 3.2 ifumaneke) Uvavanyo lomntu wesithathu lunokubonelelwa ukuba uyafuna!
Yintoni iwaranti yeemveliso zethu?
Sinazo uthotho lwezixhobo zokuhlola ukulawula inyathelo ngalinye lemveliso, ukusuka kwinto eluhlaza ukuya kwiimveliso ezigqityiweyo (ibha, ibhawudi, umbhobho, ucingo, iphepha, iflange, intwasahlobo) inkqubo nganye inokulandelwa lisebe lethu lomgangatho. iimveliso zokungalingani emva kovavanyo, siya kuthatha indawo okanye sibuyekeze kuwe, intlawulo yokuthumela ekugqibeleni!
Zeziphi izinto ezithwala imithwalo ezisetyenziswa yiSekonic Metal?
I-Sekonic Metals inezivumelwano nenani labaphethe iimpahla ezivunyiweyo kuzwelonke, umhambisi wakho wamkelekile!
Ngaba ukupakishwa kokuthumela kumanye amazwe kukhona?
IiSekoinc Metals zinokupakisha iodolo yakho yokuthunyelwa kwelinye ilizwe ngentlawulo eyongezelelweyo. Cofa apha ukujonga ukuphakheja okuqhelekileyo, cofa kwindawo yokuhlala Ncokola , okanye nxibelelana noMmeli weNtengiso ngolwazi oluthe kratya.
Loluphi ulwazi olufanelekileyo ekufuneka ndilubekile kwi-Order My Purchase Order (PO)?
Ulwazi oluthe kratya, lungcono. Nangona kunjalo, ezi zinto zilandelayo zithathwa njengezifanelekileyo: ubungakanani beenkcukacha, i-alloy, ubuninzi, ixesha elifunekayo lokukhokela okanye umhla wokuthumela, kunye neenkcukacha. Nceda uqaphele ukuba iinkcukacha zibandakanya iimfuno zovavanyo, izatifikethi, ukupakisha, kunye nazo naziphi na iimfuno ezizodwa onokuthi ube nazo. Zive ukhululekile ukubonisana neNjineli yakho yokuThengisa ngaphakathi nayo nayiphi na imibuzo, okanye qhagamshelana neNtengiso yeQumrhu ku-86-511-86826607
Lithini ixesha lakho lokuKhokela (ixesha lokuHanjiswa)?
Injineli yakho yokuThengisa iya kucaphula ixesha elikhokelayo kuphando ngalunye kuxhomekeke kubunzima bemveliso kunye nomthwalo wethu wangoku. Siza kwenza konke esinako ukuhlangabezana neemfuno zakho.
Ndingasithatha njani isigqibo sokuba yeyiphi eyona alloy ilungele indalo esingqongileyo?
Ngolwazi oluneenkcukacha malunga nokukhethwa kweengxubevange, Nceda ujonge idatha yoBuchwephesha beMathiriyeli, unokucofa kwiNgxoxo okanye usithumelele i-imeyile!
Ngaba unokwenza iimveliso ezikhethekileyo ezimile?
Sinokuvelisa zombini umgangatho kunye neemveliso ezizodwa. Singazenza ngokwemizobo yakho kunye neesampulu.Sicela sikuthumelele umzobo wokuba sivavanye!
Ndingayifumana ishedyuli yam yokusebenza?
Ewe, siya kuthumela ishedyuli yokusebenza kwe-odolo yakho veki nganye. Siza kuvavanya kwaye sivavanye konke ukuthengiswa kwimeko yokonakalisa kunye nokulahleka kwezinto ngaphambi kokuthunyelwa. Imifanekiso yovavanyo eneenkcukacha yomyalelo iya kuthunyelwa kuwe ukuze uqinisekise ngaphambi kokuziswa.
Uxabisa malini ngokuthumela kunye nokuphatha?
Indawo okuyo kunye nobunzima be-odolo yakho bumisela amaxabiso ezinto.
Ndenza ntoni ukuba umbuzo wam awudweliswanga apha?
Unokukhetha ezimbalwa. Zive ukhululekile ukusitsalela ngqo ku-86-511-86826607 ukuze uthethe neNjineli yeNtengiso engaphakathi. Ukuba ukhetha ukuthumela umbuzo wakho ngokusebenzisa ifomu kwiwebhusayithi yethu, ungakwenza oko ngokunqakraza apha. kananjalo ungasithumela i-imeyile info@sekoincmetals.com.
Isitayile 6, iringi yesitayile, IHaynes 25 Intambo, Yenza ingxubevange R26 evulwa, Ucingo lweWelding, Isitayile 6B,